झेली श्रीमान् :: सौगात आशक :: Setopati
क्यापुचिनो र चुरोटको सर्कोसँगै म उनलाई पर्खिरहेको थिएँ, सायद कफी लन्जमा रहेको मेरो समानान्तर कुर्चीले पनि। अस्ट्रेलिया बसाइँ बिट मारेको करिब आधी दशकपश्चात उनीसँग भेट हुँदै थियो।
‘म आइसकेँ, नजिकै छु, जस्ट फाइभ मिनेट्स,’ मैले फोन गरेर हेलो भन्न नपाउँदै एकै सासमा फलाक्दै फोन राखी।
उनको पाँच मिनेट, घडीले फन्को मारेको २० मिनेटपछि मात्र पूरा भयो।
त्यतिन्जेल प्रयोग हुँदासम्म भएर टेबलको एस्ट्रेमा लाचार भएर पल्टिरहेको चुरोटको ठुटो र बढिरहेको जाडोमा एकैछिन भए पनि न्यानो बनाउने प्रयासमा रित्तिएको कफीको कपलाई हेरेर समय बिताएँ।
‘सौगात, आमामा…, के सारो मोटाको।’ सरी फर बिइङ लेटबाट हाम्रो संवाद सुरू हुने अपेक्षा थियो, मलाई जे सुन्न मन लाग्दैन उनले त्यसैबाट संवाद सुरू गरी।
मानिसको फिजिकल अपियरेन्सबाटै संवाद सुरू गर्नुपर्छ र? ओहो, कस्तो मोटोघाटो खाइलाग्दो। हैन के सारो ख्याउटे मरङ्गच्यासे, खानै नपाएको जस्तो। यस्ता संवादहरू मलाई बेतुकका अनावश्यक र फजुल लाग्छन्।
मोटोघाटो सुख पाएको ज्यान र पातलो दु:ख पाएको ज्यान गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नेको जमात पनि छ।
उनीहरूलाई कसले सम्झाइदियोस्, मोटो देखिने मानिसले क्वीन्टल पीडाको भारी बोकेर हिँडेको अनि पातलो सो कल्ड मरङ्गच्यासे मानिस, प्रफुल्ल सुखको खातमा रमाइरहेको। तिनै फजुल मानिसहरू जस्तै उनले पनि फजुल वाक्य भेटी, वर्षौ पछिको भेटको संवादको सुरूआतमा पनि।
किन समयमै आइनौ भनेर प्रश्न गर्न अब उचित ठानिनँ। झनक्क उठेको रिसलाई दबाउँदै फिस्स हाँसोको लेप लागाइदिएँ मुहारमा।
‘हेल्लो भाइ’ हात हल्लाउँदै ठूलो स्वरमा बोलाई। सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट, कलिलो देखिने युवक हातमा कागजको पाना र पेन लिएर आयो। मेनु टेबलमा राख्दै सकेको मुस्कान छोड्यो।
‘टु क्यापुचिनो, एण्ड वन क्लव स्याण्डविच प्लिज’ वेटरले त्यो अर्डर टिप्दासम्म पनि सुरूआतमा दिएको मुस्कानको गतिमा कमी हुन दिएको थिएन।
‘भाइ, एउटा चुरोट पनि, लाइटमा’
‘हस् सर’ त्यो हँसिलो वेटर मेनु बोकेर गयो।
मलाई पनि क्यापुचिनो नै अर्डर गरी, के लिन्छौ भनेर सोध्न जरुरी पनि ठानिनँ उनले।
हुन त हामी पहिलो पटक सँगै बसेर कफी पिउन लागेका थिएनौं। मेरो रोजाइँ पनि प्राय: क्यापुचिनो नै हुन्छ, त्यो कुरामा ऊ पनि अन्जान थिइन। तैरिरहेको फिज ओठमा टाँसिदा क्यापुचिनोको स्वाद झन् मीठो लाग्छ मलाई।
ढिलो आएर फजुल वाक्यबाट संवाद सुरू गरेदेखि नै रिस उठिरहेको मलाई, कफी अर्डरको कुरामा भने रिस उठेन।
‘अनि सुनाउ के छ नयाँ नौलो’ फेरि पनि संवाद उनैले सुरू गर्दै थिई।
’के हुनु , सबै ठीकै भनम्। अनि तिम्रो सुनाऊ के छ ?’
‘तिम्रो जस्तै सबै ठीकै भनूँ भने, ठीक केही पनि छैन । बेठीक छ सबै भनूँ भने कथा लामो छ।’
’आज मेरो फुर्सद नै छ, यदि सुनाउँछौ भने सुन्न इच्छुक पनि।‘
उनी केही समय टेबलतिर निहुरिँदै नङले टेबल कोर्तन थाली, मानौं त्यो टेबलमा उनका सबै पीडा टाँसिएर बसेका छन् र उनी एक/एक पीडा कोट्याउँदै फाल्दैछे।
केही समय अगाडिसम्मको रिस, उनको मौनता र उनमा झल्किरहेको पीडाले मत्थर भइसकेको थियो।
पछिल्लो समय उनको वैवाहिक जीवन त्यति सुखी नभएको उनका अचेलका प्राय: फेसबुकका स्ट्याटसले प्रष्टै पार्दथ्यो।
म करिब करिब ढुक्क थिएँ, उनको पीडाको पछाडि उनको वैवाहिक सम्बन्धमा चलिरहेको उतारचढाव थियो।
उनको प्रेमीसँगै बिहे हुन लागेको खबर सुनाएकी थिई, त्यसपछि क्रमश: हाम्रो संवादहरू पातलिँदै गएको थियो, जे होस् एक मन मिल्ने साथी थिई उनी, सायद अझै पनि छे।
‘किन मौन रहेको, सुनाउन मन छैन भने कर चाहिँ गर्दिनँ है। तर,पीडा र रक्सी उस्तै हो, जति छोपेर राख्यो त्यति कडा अनि खुला छाड्यो भने फिक्का।’
उनले मेरो आँखामा हेरी, मौनतालाई भने कायम नै राखी। उनका आँखामा आँसु टिलपिल गरिरहेका थिए। एक मनले त सोचे मैले सायद गलत समयमा उनलाई भेटेँ, आज मलाई ढुंगा जस्तै बन्न मन लागिरहेको थियो। तर उनका टिलपिल आँखाले फेरि मलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए।
उनका बग्नै लागेका आँसुले गति लिए, अन्तत: पोखिन तछाडमछाड गरिरहेका आँसुलाई उनले थामेर राख्न सकिन।
टेबलमा रहेको नेप्किन उठाएर सकेसम्म आँखाका गाजल नपुछिने गरी आँसु पुछी।
हँसिलो भाइ मुस्कानसँगै कफी र क्लब स्याण्डबिच बोकेर हामीतिर आयो।
उनले भिजेका आँखा लुकाउन निहुरिएर बसी। उनको प्रयास सफल भयो या भएन, ठोकुवा गर्न नसके पनि कफी टेबलमा राख्दासम्म पक्कै पनि वेटर भाइले भने चाल पाएको हुनुपर्छ।
मलाई रोइरहेको मान्छेलाई फकाउन आउँदैन, अझ भनौं फकाउन मन पनि लाग्दैन। रुन पाउनु मान्छेको त्यतिकै अधिकार हो जति हाँस्न पाउने छ। हाँसेर मानिस आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ र रोएर पीडा कम गर्ने कोशिस। हुन त यस कुरा जगजित सिंहको यो गजलले सही नठहर्याउन पनि सक्छ।
“तुम इत्ना जो मुस्कुरारही हो
क्या गम हे जिस्को भुलारही हो”
उनका आँखा ओभाउने कुनै लक्ष्ण देखिरहेको थिइनँ। उनलाई एकोहोरो हेरिरहन पनि उचित लागेन, चुरोट सल्काउँदै कफीको चुस्की लिन थाले।
लागिरहेको थियो, एकछिनमा उनले कथा सुनाउँछे, आँसु बगाएर सायद साहस संगाल्दै छे। तर त्यसो भएन, उनी त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर हिँडी।
कता जान लागेकी केही थाह भएन, उनी कफी लन्जको गेटबाट बाहिर निस्किँदासम्म मैले उनलाई हेरिरहे। रिस पनि उठ्यो, मैले नै उनलाई पीडा दिएको जसरी उनले व्यवहार देखाइ।
टेबलमा रहेको कफी र स्याण्डबिचले मलाई जिस्कारहेको जस्तो लाग्यो। हातमा सल्किरहेको चुरोट निभाएँ, सोझै काउण्टरमा गएर बिल तिरेर बाहिर निस्किएँ।
उनीसँग अब मलाई कुनै सम्पर्कमा बस्नु थिएन, उनको त्यो अनौठो व्यवहार मलाई पचाउन मुश्किल परिरहेको थियो।
सम्झिरहेको थिएँ – उनी केही नबोली बाहिर निस्किरहँदा कफी लन्जका मान्छेहरू मलाई यसरी हेरिरहेका थिए, कि मानौं मैले उनीमाथि ठूलै अत्याचार गरिरहेको थिएँ।
“सौगात, प्लिज चेक योर मेल। सरी फर माई विहेवियर अन लास्ट मिट।”
करिब एक महिना पछि उनैको मेसेज आयो।
मलाई आश्चर्य लाग्यो। उनको त्यस्तो व्यवहार मलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। लागोस् पनि कसरी, उनको सम्पूर्ण पीडाको कारण म नै हुँ जस्तो व्यवहार देखाएकी थिई।
कफी लन्जबाट फर्किएपछि उनलाई सम्पर्क गर्ने कुनै प्रयास पनि मैले गरेको थिइनँ। तर पनि मनमा कौतुहलता जाग्यो, ल्यापटप खोलेर मेल हेरें।
“सबभन्दा पहिले त माफीबाटै कुरा सुरू गर्छु सौगात। तिमीसँग भेट्दा मलाई खोइ के भयो भयो, सम्हालिनै सकिनँ। डाको छाडेर रून मन लाग्यो, त्यसैले घर आएर सावर खोलेर आधी घण्टा मन फुकाएर रोएँ।
त्यो विरानो सहरमा पनि कहिलेकाहीँ पीडालाई त्यसैगरी सावरको पानीसँगै बगाउने प्रयास खुबै गर्थें, केही हदसम्म बगेको आभास पनि हुन्थ्यो।
मैले त्यो कफी लन्जमा गरेको व्यवहारलाई पुरानो साथी सम्झेर माफ गरिदेऊ है।
मेरो कथा त्यही दिन नै तिमीलाई सुनाउने प्रयास निकै गरें, सकिनँ। तर तिमीलाई मेरो कथा भनौं या व्यथा, नसुनाउँदासम्म मलाई पनि छट्पटी भइरह्यो। फेरि भेट्न बोलाउँ, साहस जुटेन। फोन गरुँ, बोली फुटेन। मेरो छट्पटीको अवस्था मेटाउने विकल्पको रूपमा इमेल सम्झिएँ।
तिमी नेपाल फर्किएको केही महिनामा मैले पनि करिब ६ वर्षको अस्ट्रेलिया बसाइँ बिट मार्ने निधो गरें। त्यो विदेशी भूमिमा मेरो सुख दु:खको साथीको रूपमा तिमीलाई भेट्न पाएकोमा खुसी लागेको थियो।
फेड्रेशन स्क्वायरमा बसेर कफी पिएको खुब याद आउँछ। राभेन वर्ड देखेर खैरेको देशमा त काग पनि सेतै हुने है – भन्दै हाँसेको सम्झिँदा अहिले पनि मेरो मुहारमा मुस्कान छाउँछ। तिमीसँगै मेरो मन पनि नेपाल फर्किएको थियो, म तिमीलाई मन पराउन थालेकी थिएँ सायद।
नेपाल फर्किएपछि सोझै तिमीलाई नै भेट्न आउने चाहना थियो। तिमीले फेसबुकमा अपलोड गरेको तिम्रो प्रेमिकाको फोटोले मेरो चाहना, चाहनामै सीमित राखें।
सायद त्यो दिन तिमीले पहिलो पटक तिम्रो प्रेमिका सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको थियौ। मलाई पीडा नभएको होइन तर तिम्रो खुसीमा म पनि जानीनजानी खुसी भएँ।
नेपाल फर्किंदै गर्दाको फोटोमा तिम्रो कमेन्ट देखेपछि तिमीले पनि भेट्ने कोशिस अवश्य गर्छौ भन्नेमा ढुक्क थिएँ, झूटो परिकल्पनामै भए पनि म खुसी त थिएँ।
आफ्नै देशमा केही गर्ने संकल्प लिएर नेपाल फर्किएको थिएँ।
कुनै व्यवसाय सुरू गर्ने उद्देश्यले अनेक मानिसहरूसँग भेट गर्थे। त्यसै समयमा मेरो भेट विशालसँग भयो।
विशाल एक प्रतिष्ठित कम्पनीको मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु भन्थ्यो।
मैले गरिरहेको विजनेस रिसर्चमा उसले खुबै सहयोग गर्यो। उसको व्यक्तित्वप्रति म सायद आकर्षित हुँदै गइरहेको थिएँ।
उसले मलाई आकर्षित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन, हामी बीचमा विस्तारै प्रेमको मुना पलाउन थाल्यो।
भूकम्पले घर भत्किएपछि सिन्धुपाल्चोकबाट स–परिवार काठमाडौं आएर बसेका विशालको परिवार आर्थिक रूपमा केही कमजोर थियो। अस्ट्रेलिया गएर घरको कमजोर आर्थिक अवस्था केही हदसम्म उकास्ने सपनामा रहेछ विशाल।
मसँग डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया जान चाहेको योजना उसले पनि सुनायो। मेरो भिसा सकिएको र आफू अब अस्ट्रेलिया जान नचाहेको कुरा उसलाई सुनाए।
यस कुराले उसको मन केही अमलिएको महशुस गरेकी थिएँ। कौतुहलतासहित सोधिएको उसको प्रश्नप्रति मेरो जवाफ सुनेपछि उसको मुहार यसरी अँध्यारो भयो, मानौं अब ठूलै आँधिबेरी आउँदै छ।
ऊ केही बोलेन। उसको मुहारमा ठूलै बज्र बजारिए जस्तो पीडा प्रस्ट झल्किरहेको थियो।
म भने उसको त्यो अँध्यारिएको मुहारमा कसरी खुसी छर्ने, त्यही उपायको खोजीमा थिएँ। अनेकौं प्रयासहरू गरें, ऊ जबरजस्ती मुस्कुराएको अभिनय गर्थ्यो।
उसको मायामा सायद म चुर्लुम्मै डुबेकी थिएँ। उसँग बिहे गर्ने सपनाहरू बुन्न थालेकी थिएँ। एकदिन ऊसँग बिहेको प्रस्ताव राखें।
परिवारसँग वाचा रहेछ उसको, काठमाडौंमा घर नबनाइ बिहे नगर्ने, वाचा पूरा नहुँदासम्म बिहे नगर्ने अठोट पनि। ६ वर्ष दु:ख गरेर सामाखुसीमा पाँच आना जग्गा आफैं जोडेकी थिएँ, आमाको नाममा थियो।
उसलाई यो कुरा सुनाएँ, साथै बैंकमा केही ब्यालेन्स भएको जानकारी दिएँ।
उसको मुहारमा मडारिएको कालो बादल हराएर खुसीको बादलले यसरी भरियो, मानौं ग्राफिक्स डिजाइनरले एक क्लिकमा कालो रङलाई जसरी सेतोमा बदल्छ।
प्रफुल्ल मुहारसहित ऊ बोल्न थाल्यो, त्यो जग्गा बेचेर, केही ऋण लिएर पेप्सीकोलामा सजिलै घर किन्न सकिन्छ।
म त प्रेममा एकोहोरो भइसकेको थिएँ, उसले जसो भन्यो त्यसै गर्थें, उसकै खुसी सर्वोपरी ठान्थें।
विशालको इच्छा अनुसार नै हामीले दुवै जनाको संयुक्त नाममा घर किन्यौं।
हाम्रो धुमधामसँग बिहे भयो।
प्राय: चेलीको रहर हुन्छ, आफ्नो श्रीमानले ल्याएको गहना र वस्त्रमा सजिएर उसको घर भित्रिने।
मैले भने बिहेमा बेहुलाले ल्याउनु पर्ने गहना र सरसामान पनि सबै आफैं नै किनें।
हुन त अब के विशालको, के मेरो, सबै हाम्रो भएको थियो। तिलहरी र मंगलसुत्र भने विशालले मलाई किन्न दिएन, आफैं किन्यो। म बुहारी बनेर आफैंले जोडेको हाम्रो संयुक्त घरमा भित्रिएँ।
बिहेको पहिलो रात, आफूले माया गरेको मान्छेसँग बिताउन पाएकी थिएँ। मन रोमाञ्चित थियो। ऊ आयो र केही नबोली ओछ्यानमा पल्टियो।
मैले उसलाई च्याप्प अंगालोमा कसें र उसको ओठमा चुमें। ऊ टसमस भएन। वर्षौंदेखि संगालेर राखेको मेरो कौमारित्व मेटाउन चाहिरहेकी थिएँ, उसले मेरो चाहनाको कुनै वास्तै गरेन। म पनि ओछ्यानको अर्को छेउ फर्किएँ।
पछाडिबाट मेरो कम्मरमा एक्कासी हातले कस्यो। मेरो शरीरभरि उसको हातहरू चलमलाउन थाले। अंगअंगमा आगोको रापले पोलिरहेसरि आभाष हुँदै थियो। म उसलाई ढाड फर्काएर धेरै बेर रहन सकिनँ।
अन्तत: मेरो चाहना उसले पूरा गर्यो। मैले त्यसदिन धेरै नौला कुराहरूको अनुभव गरें – सिन्दुर, नयाँ परिवार, श्रीमान् अनि यौन।
भोलिपल्ट दुरान फर्काउन गइयो।
विशाल पनि मख्ख थियो, ज्वाइँ साहेवको मेजमानी पाएर। ऐना हेर्थें, आफूले आफैंलाई पहिलोचोटि सुन्दरीको उपमा दिएँ। रातो सिन्दुर, रातो पोते, रातो चुरा, रातो सारी। साँच्चै म सुन्दरी नै देखिएको थिएँ। त्यस रात हामी त्यहीँ नै बस्यौं, मेरो माइती अनि विशालको ससुराली।
अर्को दिन बिहान खाना खाएर घर फर्कियौं। विवाह दर्ता गर्नु थियो, दर्ता गर्न जाऔं भने, विशालले खासै वास्तै गरेन।
बिहेको पहिलो साता नै सुखद रहेन मेरो लागि, सबैले निकै फरक व्यवहार गर्थे।
मैले कल्पना गरेभन्दा निकै फरक अनुभव गरें मैले, मेरो वैवाहिक जीवन। साथीसंगीले सुनाएका अनुभवहरूभन्दा निकै भिन्दै भए मेरा अनुभवहरू। बिनाखबर रातमा बाहिरै बास बस्न थाल्यो विशाल।
सबै एक्कासी पराइ बन्दै थिए मसँग, मैले बुझ्नै सकिनँ। मैले गल्ती के गरें? मैले जानेको सबै गरेकी थिएँ, सक्नेभन्दा धेरै दिने कोशिस गरेकै थिएँ। त्यही पनि खोई के पुगेन पुगेन।
एक महिना पछिको कुरा हो, मामाको छोराको बिहे थियो।
सिन्दुर, पोते र गहनामा सिंगारिएर बिहेमा जान मन थियो। साँच्चै भन्नु पर्दा बेहुली जस्तै देखिन अझै मलाई रहर पुगेकै थिएन। सिंगार सकेर दराजमा गहना खोज्न गएँ।
मंगलसुत्र र तिलहरी बाहेक कुनै गहना थिएन। दुरानमा गएर फर्किएपछि दराजमा राखेको गहना मैले छोएकै थिइनँ। अतालिँदै सासू आमालाई सोधे।
व्यवहार मिलाउन विशालले गहना बेचेको जवाफ पाएँ। म त छाँगाबाट खसेकोजस्तै भएँ।
तिलहरी र मंगलसुत्रसँगै रहेको विशालको नागरिकतामा आँखा पर्यो, जन्म मिति देखेर म झन् अवाक् भएँ। मेरो उमेरभन्दा सात वर्ष कान्छो उमेर देखेँ।
मसँग त मेरै उमेर बराबरको भनेको थियो। विश्वास नलागेर सासू आमालाई घुमाएर सोधें, नागरिकताको उमेर नै सही रहेछ। मलाई आश्चर्य लाग्यो, विशालले मसँग किन झूट बोल्यो।
त्यसदिन साँझ विशाल रक्सीले मातेर घर आयो।
गहनाको कुरा र उसको उमेरको कुराले छाती पोलिरहेको थियो।
म धेरैबेर यस विषयमा बेखबर रहेर बसिरहन सकिनँ।
मैले उसलाई सोधें, उमेर झूट बोल्नुको कारण। उसले फर्काएको जवाफले ममाथि बज्रपात पर्यो। कोही मानिस यो हदसम्म कसरी निर्दयी र स्वार्थी हुन सक्छ, मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ।
उसले त सुरूमा मसँग डिपेण्डेण्टमा अस्ट्रेलिया जानको लागि प्रेमको नाटक गरेको रहेछ। पछि घर र सम्पत्तिको लोभले बिहे गरेको रहेछ। मास्टर्स सके भनेको मान्छेले एसएलसी मात्र पास गरेको रहेछ।
ऊ अरु कोहीसँग प्रेममा रहेछ। उसले रक्सीको नसामा सबै कुरा ओकल्यो। उसले प्रहार त शब्दको मात्र गरेको थियो, म भने गोली लगेर छट्पटाइरहेको सिपाही जस्तै भएकी थिएँ।
म कसरी निदाउन सक्थें, रातभर रुँदै ओछ्यानमा पल्टिएँ। मलाई ज्यूँदो लाससरी बनाएर पनि मेरो शरीर भोग गर्न भने पछि परेन ऊ।
रुँदै माइत गएर सबै व्यथा पोखौं जस्तो लाग्थ्यो तर आफैंले रोजेको श्रीमानले गरेको कर्तुत सुनाएर आमा बुवालाई पीडा दिन पनि मन लागेन।
यसैगरी मैले नै जोडेको घरभित्र उसका परिवारले अनेक मानसिक र शारीरिक यातना दिँदै मलाई डिप्रेसनको सिकार बनाए।
सहनशीलताको बाध भत्कियो, बुवालाई रुँदै सबै कुरा सुनाएँ।
मेरो डिभोर्स भयो।
मैले आफ्नै सम्पत्ति पनि आधा मात्र पाएँ, म हुनुसम्म कसैको स्वार्थको निम्ति प्रयोग भएँ।
घाउलाई निको बनाउने प्रयास गर्दै थिएँ, केही हदसम्म सफल हुँदै गइरहेकी थिएँ।
विशालले किनिदिएको तिलहरी र मंगलसुत्र झोलामा भेटें। साइनो त केही बाँकी रहेन, यो झिनो सम्झना के राखूँ जस्तो लाग्यो।
एक मनले त झ्यालबाट बाहिर हुर्याइदिउँ जस्तो लाग्यो। फेरि सोचेँ, मेरो लागि उसले गरेको खर्च यति त हो, यही नै भए पनि भोग गरेर मन बुझाउँछु। सुन पसलमा लगेर बेच्ने निधो गरें।
घर नजिकैको सुन पसलमा पुगेँ। मलाई पसले दाइले अनौठो पारामा हेर्दै भने – सुन त नक्कली हो। माया त नक्कली गर्नेले सुन नक्कली दिनु के नौलो भयो र। तर मन फेरि बिझायो, त्यही परिवारको सम्झनाले, त्यही सिन्दुरको सम्झनाले, त्यही झेली श्रीमानको सम्झनाले।
त्यो त्यही दिन थियो सौगात, जुन दिन म कफी नखाइ रुँदै फर्किएर तिम्रो मन दुखाएकी थिएँ।”